China Landscape Grass for chaim DIY iivenkile mveliso kunye nabathengisi | Wanhe
I-Turf yi-100% yokulwa ukwaluphala kunye ne-UV
Isiseko 2.Turf nayo 100% anti-ukwaluphala kunye UV
3.Uxinano, igeyiji, inqanaba lokuthunga linokuhlengahlengiswa ziimfuno. Ke iindleko zinokungaphezulu okanye ngaphantsi.
4.The ubukhulu nobubanzi ifayibha / vulu zingalungiswa ngokweemfuno, ngoko ke iindleko zinokuba ngaphezulu okanye ngaphantsi.
5.Ukunxiba okuphezulu ukunxiba
Ubume bendalo obunobume bendalo, abuqulathanga nayiphi na into enzima engenabungozi emhlabeni nangamanzi aphantsi komhlaba.
7.Resisting ubumdaka, ubushushu, static ombane kunye nengxolo njl Easy ukuba Coca: Ukucoca ngaphakathi vacuum cleaner. Ukucoca ngaphandle kutshintsha amanzi acocekileyo.
Ufakelo 8.Easy, ulondolozo lula
MOQ:Iimitha zesikwere ezingama-500
Ixesha lokuzisa:Iintsuku 15-25
I-OEM kunye ne-ODM Yamkela; Ukuhanjiswa kweesampulu zasimahla
Isicelo: Iigalari, iibhalkhoni, igadi, uphahla, i-kindergartens, izikolo, iiyadi, amabala okudlala, imiboniso yeemoto, imiboniso, iifestile zokubonisa, iikhaphethi, imethi yezilwanyana zasekhaya, amabala ebhola, njl.
Izinto ezikumgangatho ophezulu ze-PE, i-elasticity ephezulu, i-edge edge, ukunxiba okunganyangekiyo, ukunganyangeki, ukucima umlilo, ukungena kwamanzi, umgangatho ophezulu, ukulungele amabala ebhola, iibhalkhoni, iintendelezo, iipaseji.
1. Q: Loluphi uluhlu lwemveliso yengca yakho eyenziweyo?
A: Ingca yommandla wegadi
2. Q: Kuthekani ngemijelo yamanzi?
A: Akukho sidingo sokukhathazeka malunga nomsele wamanzi. Ingca eyenziweyo inyibilika ngokupheleleyo kwaye amanzi emvula ayayidlulisa njengoko ingca eyenziweyo inenkxaso exhaphakileyo.
3. Q: Ngaba ingca eyenziweyo ikhuselekile ebantwaneni nakwizilwanyana zasekhaya?
A: Uvavanyo olungqongqo luyenziwa ukuqinisekisa ukuba azinazo naziphi na izinto eziyingozi ezenza ukuba zikhuseleke ebantwaneni nakwizilwanyana zasekhaya.
4. Q: Yintoni i-MOQ?
A: Ukuba sinesitokhwe seGrass eyenziweyo, i-MOQ inokuba ziimitha ezili-100 zesikwere. Ukuba asinayo imfuyo yeGrass eyenziweyo, i-MOQ kufuneka ubuncinci ibe ziimitha zesikwere ezingama-500.
5. Q: Uyikhetha njani ingca eyenziweyo?
A: Singacebisa eyona ngca ingeyiyo eyimfuneko ngokweemfuno zabaxhasi bethu. Ngaphezu, iqela lethu zobugcisa unikezelo engaguqukiyo iitalente kunye nobuchwepheshe entsha,
imveliso esingabizi ingamkelwa, leyo ukwanelisa ngokupheleleyo iintlobo ezahlukeneyo iimfuno zabathengi '. Kwaye inyanzelisa ekuboneleleni ngesisombululo esenzelwe wena kubathengi, nazo zonke iinkcukacha zesayensi kunye nokuzimisela kwinkonzo, ikwenza inkonzo egqibeleleyo.
6. Q: Ngaphambi kokuba wenze iodolo, ndingandwendwela umzi-mveliso wakho?
A: Ewe, wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu. Nceda usazise ishedyuli yakho yokuhamba ngaphambi kwexesha. Singalungiselela ukukuthwala ehotele okanye kwisikhululo seenqwelomoya.
Egqithileyo Imidlalo emininzi
Okulandelayo: Ingca yokuma komhlaba yokuThengisa-111
Ingca eyenziweyo kunye neLandscaping Rock
Ipeyinti yokuma komhlaba yengca
Ingca ende yokuLungiswa komhlaba
Indawo yengca yanamhlanje
Ingca yendalo yokuLungiswa komhlaba
Umde wokuhombisa iiGrass Landscaping
Indawo yaseWild Grass
Ingca yebhola eTurf, Ukuxelisa Ikhaphethi Yengca, Ingca eyenziweyo, Umhlaba webhola ekhatywayo we-Astro Turf, Ingca yeGalufa eyenziweyo, Ingca yokwakheka komhlaba yokuBekwa komhlaba,